Wararka Maanta: Axad, Sept 10, 2017-Qaar kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalladda Dubai oo sheegay in ay ka cabanayaan dhibaatooyin
Abshir Muumin oo ka mid ah ganacsatada cabashada muujinaya ayaa waxaa uu baaqay in wax laga qabto dhibaatooyinka ay kala kulmaan dad huwan shaarka ciidanka Amniyaadka Dubai.
Mursal Salaad, oo isaguna ka mid ahaa ganacsatada warbaahinta la hadashay ayaa tibaaxay in ganacsato badan oo Soomaaliyeed ay ku dulman yihiin dalkaasi, isaga oo intaasi ku daray in ganacsatada la dhibaataynayo ay ka mid yihiin ganacsato dalka Imaaraadka ku leh hanti Muguurta ah, Shirkado iyo ganacsi kale.
Waxaa uu xusay in dhibaatada aan look ala eegan ganacsatada ayna saamaysaysay ganacsato dalkaasi ku sugnaa sanado badan sida 20 sano, 30 sano ilaa iyo 40 sano, sida uu hadalka u dhigay.
Shirkooda jaraa’id ayaa waxaa ay kasoo saareen war-murtiyeed u qornaa sidan:
Warsaxaafadeedkooda ayaa waxaa ay ku sheegeen in ay kag cabanayaan rag ay magacyadooda ku kala sheegeen, Cubayd abu Cali, UAE, Abu Cali, Maxamed Catiiq ---- Abu Cabdullahi, iyo qaar kale.
Ahmed barre waxaa looga yeeddhay xafiiska Muraaqabad--(station police) taariikhdu markey ahayd 09/05/2017, ka dib markii uu soo jaajusay Bashiir .